शरीरमा रगत बढाउने ७ घरेलु उपाय ! | सुदुरपश्चिम खबर
कामको चटारोमा हामी हाम्रो स्वास्थ्यको उचित रेखदेख गर्न सकिरहेका छैनौ । विशेषगरि थकान, कमजोरीले गर्दा हाम्रो अनुहार पनि पहेलो, रगत नभएको जस्तो देखिन्छ । तर ख्याल गर्नुस यहि लक्षण कतै रगतको कमि अर्थात रक्त अल्पताको त हैन । थाक्नु , कमजोरी हुनु , अनुहारको रङग पहेँलो ,फुङग उडेको जस्तो हुनु अनि हात(खुट्टा सुनिनु जस्ता लक्षण रक्त अल्पताको हो ।
शरिरमा हेमोग्लोबिन कम हुने मान्छेहरुलाई रक्त आल्पता हुन्छ।शरिरमा रगत बढाउने ७ घरेलु उपाय जान्नुहोसः१.घरको करेसा बारिमा पाईने पालक,बेथेको साग, केराउ, हरियो धनियाँ, गोलभेडा नियमित रुपमा खानाले शरिरमा रगतको मात्रा बढ्छ ।
२. पाकेको आँप दुधसँग खानाले रगत बढ्छ ।३.रगत बढाउने खाना जस्तै गहुँ, चना, मुगीको दाल पनि धेरै उपयोगी हुन्छ।४. लसुन खानाले पनि शरिरमा हेमोग्लोबिन कम हुन दिँदैन ।
५.एलोवेराको जुस नियमित रुपमा खानु पर्छ यसले शरिरमा रगत बढाउने ठुलो भुमिका खेल्छ।६. अमला अर्थात यसको जुस खानाले पनि रगत बढ्दछ ।७. अनार र लौकाको जुस खानाले रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढ्छ ।
यो पनि : ग्यास्ट्रिक भएकाले ध्यान दिनुपर्ने यी ६ कुरा !ःकागती पानी ः पेटमा धेरै ग्यास भएको अवस्थामा कागती पानी पिउने । यसले ग्यास हटाउने काम गर्छ र पेट फुल्न दिँदैन । खाली पेटमा कागती पानी खानाले पेटमा ग्यास कम हुन्छ ।कार्बोहाइड्रेट कम खाने ः पेटमा ग्यास जमेर पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले बियर, वाइन, मकै, राजमा, बन्दा, प्याजजस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ ।
दूध नपिउने ः ग्यास्ट्रिक भएकालाई दूधले फाइदा गर्दैन । पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले दूध नखानु नै बेस हुन्छ । यसको सट्टा दही र अन्य दूधबाट बनेको परिकार खानु राम्रो हुन्छ ।
प्रशस्त पानी पिउने ः लगातार पानी पिउँदा पेटमा ग्यास जम्मा हुन पाउँदैन र जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम राख्छ । तर पानीको सट्टा कोक, फेन्टाजस्ता कोल्ड ड्रिङ्कको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसले पेटमा ग्यास बढाउँछ ।
लसुन पानी ः बिहान उठ्नासाथ दुई–तीन पोटी लसुन पानीसँग निल्ने हो भने ग्यास्ट्रिक भएकाहरूलाई फाइदा गर्छ । उच्च रक्तचाप भएकाहरूलाई समेत यसले फाइदा गर्छ ।
खाना समयमा खाने ःग्यास्ट्रिक भएकाहरूले सकेसम्म प्रत्येक दुई घन्टाको फरकमा खाना खाने । लामो समय केही नखाँदा पेटमा हावा भरिएर यसले समस्या उत्पन्न गर्छ ।